Wasaaradda Cadaaladda oo Muqdisho ka furtay siminaar lagu baranayo habraaca sharci qorista | Somsoon
Home WARAR Wasaaradda Cadaaladda oo Muqdisho ka furtay siminaar lagu baranayo habraaca sharci...
Wasaaradda Cadaaladda oo Muqdisho ka furtay siminaar lagu baranayo habraaca sharci qorista
Wasiirka Cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya Abuukaate Xasan Xuseen Xaaji ayaa magaalada Muqdisho ka furay tababar la xiriira sameynta tirakoobka sharciyada dalka.
Tababarkaan ayaa socon doona muddo labo cisho ah, waxaana lagu baranayaa habraaca sharci qorista, waxaana ka qeyb galay shaqaalaha wasaaradda, hey’adaha madaxa banaan, xubno ka kala socday xafiiska xeer illaalinta qaranka, maamulka gobolka Banaadir, xafiiska Garyaqaanka guud ee qaranka, Taliska Ciidanka Asluubta, xafiiska Hanti-dhowrka Qaranka, xubno ka socday Jaamacadaha Muqdisho iyo marti sharaf kale.
Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda Soomaaliya Abuukaate Xasan Xuseen Xaaji ayaa kula dar daarmay shaqaalaha tababarka loo furay inay ka faa’iideystaan fursadda soo martay, ayna uga faa’iideeyaan inta aan nasiibka u yeelan, ayna ka soo dhalaallaan howlaha loo igmaday.
“Arrinta maanta la idinku yeeray waxa ay tahay inaad ka qeyb gashaan tababarka oo wacyi gelin ahaan u joogtaan xafiisyada aad joogtaanna si daacad ah ula shaqeysaan, idinkoo aad ilaalineysaan sharciga dalka u degsan, ahmiyadda labaad ayaa ah in la joogteeyo wada shaqeynta Wasaaradda iyo hay’adaha ku shaqada leh” ayuu yiri wasiir Xasan.
Isagoo sii hadalayay wasiirka Cadaaladda Soomaaliya ayuu yiri, “Wasaaradda Cadaaladda waxa ay shaqadeedu tahay inay arruuriso sharuucda dalka u degsan, keydiso iyadoo kaashaneyso xafiiska Garyaqaanka guud oo shaqadooda tahay inay soo saaraan faafinta rasmiga ah, marka waxaa loo baahanyahay in sharuucda dalka loogu soo hagaago Wasaaradda Cadaaladda iyo xafiiska garyaqaanka Guud”.
Article horeTaliyaha Ciidanka Booliska oo maanta magacaabay Taliyaal ciidan
Article socoda Al-Shabaab oo maanta la wareegay deegaan hoos taga D/Cadaado